I-Niagara Falls Tour esuka eNew York | Ukuhamba kwe-Absolut
I-Niagara Falls Tour esuka eNew York
Ukuhamba kwe-Absolut | | ENew York
IsiXeko saseNew York, esaziwa njengesixeko esingaze silale, yenye yeendawo ezininzi zokuphupha zabahambi. Ukuhamba ngesi sixeko sikhululekile kuyadingeka ukuba uchithe ubuncinci iveki apho, ujonga ixesha lokubona iindawo ezikufutshane ezinomdla, ezinje iiNgxangxasi zeNiagara ezidumileyo.
Izicwangciso xa kuziwa ekuboneni iNew York azipheli. Ukusuka ekuthatheni utyelelo olufunekayo kwi-Empire State Building, ngombono wesixeko esivela phezulu, ukuya kubona umboniso womculo kwi-Broadway, uhambahamba nge-Times Square okanye ubona iBrooklyn Bridge. Kwi-Big Apple ungonwabela, ewe, intwana yendalo enkosi kumphaphu oluhlaza omkhulu oyiCentral Park. Nangona kunjalo, abathandi beendawo eziluhlaza banokuphosa ubukhulu beendawo zendalo.
Kungenxa yoko le nto sikuphakamisa Into engakhohlwayo kunye nengalibalekiyo yeNiagara Falls ukhenketho olusuka eNew York.
1 Ufika njani eNiagara Falls
2 Yintoni ongayibona kukhenketho lwe-Niagara Falls
3 Kutheni kufanelekile
Ufika njani eNiagara Falls
I-Niagara Falls ngummangaliso wokwenene, ke ungaphoswa lithuba lokufikelela kuwo. Ukwenza lula, ungabhukisha ukhenketho ngeSpanish kwi Iiwebhusayithi zeHellotickets, ukuze sikhathazeke kuphela ngokonwabela imbonakalo yomhlaba.
Ezi ngxangxasi zibekwe kwiikhilomitha ezingama-660, kufutshane nesixeko saseToronto kunye nomda waseCanada. Banokufikelelwa ngemoto ehlala malunga neeyure ezintandathu, ngebhasi, uhambo olumalunga neeyure ezilishumi, okanye ngenqwelomoya, uhambo malunga neeyure ezimbini. Ngotyelelo olukhokelwayo uza kufika kwangoko, kwiiyure ezisixhenxe okanye ezisibhozo, ukongeza kwintuthuzelo eyongezelelweyo yokungakhathazeki ngayo nantoni na kunye nokongezwa kokwazi imbali kunye nawo onke amanqaku onomdla ngaphandle kokucwangcisa yonke into kwangaphambili.
Yintoni ongayibona kukhenketho lwe-Niagara Falls
Kuhambo oluya eNiagara Falls ukusuka eNew York baya kusibonisa yonke into ekufuneka siyibonile.
I-Niagara Falls State Park isinika umbono onomdla apho siza kubona khona ukuwa okuthathu, ngombono ogqibeleleyo wokuthatha imifanekiso. IiHellotickets zikwabandakanya ukhenketho olwaziwa ngokuba sisiNtombi seNkungu, kunye nohambo ngesikhephe kufutshane nokuwa okuphuma kummandla wase-US.
Kuhambo oluya kwiingxangxasi ungathatha iindlela ngeenyawo ngeNiagara Gorge, ngeendlela ezinobude obahlukeneyo kwaye zivumela ukufikelela kumhlaba ojikeleze umhlaba.
Elinye inqaku lokundwendwela kukhenketho lwe-Niagara Falls sisiqithi seGoat Island, isiqithi esiphakathi kokuwa esinomfanekiso womqambi uNikola Tesla kunye nembono yeTerrapin Point.
Uhambo olufana nolo lusisa eNew York lude kwaye lufuna umbutho omninzi. Ukuqesha ukhenketho oluya eNiagara Falls ukusuka eNew York ngumbono omkhulu, kuba uhambo lude kakhulu kwaye kunokuba nzima ukuba lwenziwe ngemoto okanye ngebhasi ngaphandle kokhokelo lwabo bayaziyo le ndawo.
Ukhenketho oluququzelelwe yiHelloticket lusinika ithuba lokukhetha iipakethe ezahlukeneyo ngokundwendwela usuku olunye okanye ezininzi, sisazi indawo entle yokuwa kodwa nezixeko ezinjengeFiladelphia okanye iToronto. Kule miqulu, ukutyelelwa kwenziwa kuwo onke amanqaku anomdla kwimpophoma, ukusuka kwiSiqithi seGoat ukuya kwiNorgegara Gorge. Asizukuphoswa ngumsebenzi okanye sithuba kwaye siya kuba nakho ukubona lo mhlaba mhle ngokweenkcukacha.
Zombini kubathandi bendalo kunye nakwabo bakonwabelayo ukwenza iingxelo zokufota kwiindawo zobuhle obugqithisileyo, olu hambo lubalulekile ekufuneka longezwe kulo xa usiya eNew York.
Ngolu hambo lukhokelwayo kuya kufuneka sibhalise kuphela, sikhethe ukhenketho ngayo yonke imisebenzi yalo kwaye sinikele lonke ixesha lethu ukuba sonwabe kule ndawo imangalisayo. Kuya kuba ngamava angenakulibaleka!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » I-Niagara Falls Tour esuka eNew York
Yintoni omele uyenze eBerlin